Zvinhu Zvokuziva Kuti Utange NeKuteedzera Vaponeswa Vateereri paFacebook | Martech Zone
NeChishanu, Gumiguru 18, 2019 NeChishanu, Gumiguru 18, 2019 Rae Steinbach
Pane zviitiko kana iwe uchida kunongedza vateereri vatsva neako Facebook kushambadzira. Zvisinei, hazvishamise kuti vateereri vako vawedzere munzira dzakakosha.
Semuenzaniso, pamwe iwe wakagadzira iyo Tsika Vateereri ine zvimwe zvakakosha zvido uye huwandu hwevanhu maficha. Nevateereri ivavo, pamwe wanga uchinongedzera dunhu. Kugona kutevedzera vateereri vakaponeswa kunogona kubatsira zvakanyanya kana iwe ukambotangisa nyowani marketing campaign uye ndaida kunongedza irwo rudzi rwevashandisi, asi mune imwe nzvimbo yenyika, kana dunhu diki.
Nevateereri vanodzokorora, zvese zvaungofanirwa kuita kushandura dunhu, pachinzvimbo chekugadzira nemaoko vateereri vatsva nezvirongwa zvese kunze kweiyo. Mamwe ese marongero aunogona kungosiya wega.
Facebook haipe chinongedzo chekudzokorora vateereri vakaponeswa. Izvo zvakati, iwe unogona achiri kudaro nekutevera aya akakosha matanho:
kushandisa Facebook Bhizinesi maneja (kana Ads Manager kana iwe usina Business Manager account), sarudza inoenderana account ad, wobva wasarudza Vateereri pasi payo Asset chikamu chekutsvaga yako Vateereri Vakaponeswa. Tarisa bhokisi riri padyo nezita revateereri raungade kuteedzera.
Zvadaro, chengetedza pepeta bhatani. Izvi zvinokutendera iwe kuti ugadzirise kune vateereri. Zvekare, izvo zvicharatidza kubatsira kana iwe uchida kuita shanduko kune vateereri vateereri musina kuisa nemaoko iwo akafanana iwo ruzivo zvakare.
Iwe uchazoda kupa yako vateereri vateereri zita idzva kuti vadzivise nyonganiso. Izvi zvinogona kuve zvakapusa se Duplicate ye [Zita Rekutanga Revateereri]. Rongedza zita racho maererano.
Iye zvino unogona zvakare kugadzirisa kune chero mamwe marongero aunoda kuchinja. Pamwe iwe unoda kunongedza rakasiyana zera boka neako mutsva mushandirapamwe. Zvichida iwe ungangoda kunongedza chete murume kana murume. Kugadziriswa kwaunoita kunoenderana nezvinangwa zvako chaizvo. Paunenge wagutsikana nekugadzirisa kwako, zvese zvaunofanirwa kuita kudzvanya "Sevha seNew."
Ita shuwa kuti hausi kubaya Update! Izvi hazvigadzi vateereri vatsva. Pane kudaro, zvinongoshandisa edhisheni kune iripo. Iwe haudi kuti izvo zviitike.
Izvo zvakare zvakakosha kuti uzive kuti kune zviitiko kana zvingaite zvine musoro kudzivirira vateereri kusangana. Facebook inokutendera iwe tarisa zvakapindirana, zvichikubatsira kuti unzwisise zvirinani zvaunogona kuita kuzvidzivirira kubva kwavari. Nekudaro, kana iwe uchinge uchida imwe mwero wekubatana pakati pevateereri vako, iyi yakapusa maitiro inogona kubatsira zvikuru.
Rae akapedza kudzidza kuTufts University akabatanidzwa neInternational Relations neChinese degree. Mushure mekupedza nguva achigara nekushanda kunze kwenyika kuChina, akadzokera kuNYC kunoteedzera basa rake uye kuenderera nekugadzirisa zvemukati zvemukati. Rae anofarira zvekufamba, chikafu, uye kunyora (hongu).